Pedro Rodriguez Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Pedro Rodriguez Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'Mudzidzisi'. Our Pedro Rodriguez Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvekwaniso rake asi vashomanana vanofunga Pedro Rodreguez Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Pedro Rodriguez Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma akaberekerwa musi we 28th waJuly 1987 muSanta Cruz de Tenerife, Spain naamai vake, Monserrat Ledesma Encinoso uye baba, Juan Antonio Rodríguez Pedro.
Pedro ndiye mwana oga wevabereki vake. Akanga asina kumbobviswa mwana wechipiri.
Pedro akadzidziswa zvakanaka uye aiva neukama hwepedyo nevabereki. Kuve wakagadzirirwa zvakakwana kuchikoro nemitambo kwaiva kutanga kwoupenyu hwemukomana muduku. Akawana kuenzanisa kwakakwana pakati pekuverenga mabhuku ake uye kutamba nebhola neshamwari.
Pedro ainge atanga kutamba mubhola (ane makore 16). Basa rake rehuduku rakatanga muna 2003 paakatanga kupinda muSan Isidro academy kwaakamboita kusvika 2004.
Muna 2004, akawana kutarisa kwe FC Barcelona academy. Pedro akapedza mutambo pachikwata uye pashure akazokokwa kupinda muCatalan club academy. Akaenderera mberi zvidzidzo zvake pachikoro ndokutamba nechechi yechikwata chechidiki kusvika 2005.
Gore 2005 rakamufambira zvakanaka sezvaakapiwa chibvumirano chebhizimisi chaakaina uye chechigamba muboka rechitatu rebhubhu. Pakati pe2005-2007, Pedro Rodríguez akava mumwe wevatambi vechikwata vatatu.
Vechidiki vaSpanish vakaratidzwa zvinoshamisa vakamubvumira kutamba kwechikwata chechikwata chechikwata chakatangira kubva ku2007 kwaakawana zvinangwa zvakawanda.
Muna 2009 / 2010, Pedro akava mutevedzeri wokutanga munhoroondo yekukwikwidza mumakwikwi matanhatu emakwikwi akasiyana mugore rimwe chete, nhoroondo yakangosangana neLionel Messi uyo akazviita mu2011.
Pamwechete, Pedro akamboita mutambo mukuru we 321 weboka rekutanga reBarcelona, ​​akaisa zvigaro zve 99 uye kupa hurumende 46 dzinobatsira izvo kupfuura 50% (25) akaenda kuna Messi.
Vamwe vose sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Pedro Rodriguez Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Amai vaPedro, Monserrat Ledesma Encinoso nababa, Juan Antonio Rodríguez vane ruzivo rwakanyanya pamusoro pehupenyu hwavo paIndaneti.
Nyaya inobva kune zvinyorwa zvinoremekedzwa asi zvinoratidza kuti vanogara mumhenderekedzo yeguta reSpain yeSanta Cruz de Tenerife mukurumbira inoonekwa seguta rezvakasikwa.
Vakaita zvose zvavanogona kuti vauye nemwanakomana wavo mumwe chete nenzira yakanakisisa inobvira iyo yakabhadharwa. Pedro anopa vabereki vake chinhu chimwe nechimwe chavanoda.
Pedro Rodriguez Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Rudo rwaPedro Upenyu hwakakosha. Akataura naCarolina Martin uyo ari nhoroondo uye anonzi anonzi 5 makore akare kupfuura iye. Vakasangana apo Pedro aiva 17. Panguva iyoyo, Carolina yaiva 22.
Kusiyana nedzimwewo mhandara musikana, pedro akachengetedza kuti asave nechikonzero chezvikonzero zvakanaka. Zvose zviviri zvinoda shiri dzakaroorana muna gore 2005 mushure mekuita kwavo pfupi. Pasi pane zvifananidzo zvinoratidza hukama hwavo.
Tarisa chinyorwa ichi chakawedzerwa pasi apa. Vanotarisa vakanaka pamwe nemotokari yavo.
Pasi pave nemadzimai ane magirazi evefumi Bodega Iniesta waini iyo inowanikwa naPedro's shamwari yakanaka uye yekare yeGroup team mate, Andres Iniesta.
Vakasarudza kugara makore anopfuura 8 vasati vava nemwana wavo. Vaviri vacho vakava nemwanakomana wavo wokutanga, Bryan Rodriguez Martin musi wa 4th April 2013.
Mhuri yaPedro Rodriguez's
Carolina Martin ane rudo uye anotarisira zvakanaka murume wake. Pedro pachake murume ane rudo uye ane hanya kumhuri yake. Iyewo haaiti chero chinhu chipi zvacho. Upenyu hwake hwemhuri zvechokwadi huri kubudirira kukuru. Zvakare, vanotarisa zvakanaka pamwe chete
Pedro Rodriguez nomudzimai, Carolina Martin
Ukama hwavo hunoenderana nerudo, kuvimba uye kuwirirana. Saka, havana kumbofunga nezvekuparadzana kana kurambana. Zvakakosha kucherechedza kuti Carolina Martin anonzi ave ari pedyo chaizvo naDaniella Semaan uyo ari mudzimai we Cesc Fabregas sezvinenge panguva yekunyora nyaya ino.
Sezvo vanhu vachikoshesa ukama hwepamberi hwaPedro husina kugadzikana, zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvazvo Radamel Falcao, Nemanja Matic, zvakasiyana, Edinson Cavani uye Adriano avo vane mararamiro avo vane mararamiro ewanano uye nharo.
Pedro Rodriguez Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Saved yake Childhood Club kubva kuBhangeruptcy
Pedro's youthship club, San Isidro vakachengetedzwa kubva kubhadhara nekuda kwaPedro Chelsea.
Sangano reSpain-tier kubva kuTenerife raive ne € 420,000 kubva kune mutambi wacho kutamira kune Chelsea, chikamu chinopfuura kachina bhajheji yegore negore (€ 85,000).
Pedro akanga ari 10th Spaniard kuti adzokere kuCentral FC muChirungu Premier League.
Pedro Rodriguez Kubata Vana Nhoroondo Plus Untold Biography Facts -Simba uye Utera
Anoshandisa zvose tsoka dzake mumutambo uyo wakaratidza kuti akasiyana-siyana mukutamba kune rumwe rutivi rwemukati.
Anonyanya kukoshesa unyanzvi. Ane simba rakanaka kwazvo pamusoro pebhola mumutambo. Akava neruchiva rwakakura uye unyanzvi hwakamuita kuti ave anoshamisa uye anokoshesa nekukurumidza uye kumira kwenguva refu uye shoma shots shots.
Pedro chete utera uhwo hutano hwake hwekutungamirira.
Xavi Hernandez Childhood Indaba Zvimwe Untold Biography Facts